नया जोश सहित रविको सिधा कुरा जनता अघि बढ्दै छ। यो भाग देखि आबरण मा समेत परिबर्तन गर्दै थप सुबिधा दिदै सर्बसाधारण का लागि अझ लागि पर्ने भएको हो। जनतालाई सर्बोपरि मान्दै अघि बढेको कार्यक्रमले जनतालाई समस्या सुनाउन र घटनाको जानकारी लिने सजिलो बनाउन २४ घण्टा खुल्ने हेल्प डेस्क राख्ने भएको हो। तस्तै सिधाकुरा जनताको र न्यूज २४ को कार्यालय देशको ७ ओटै प्रदेशमा बनाइने भएको छ ! त्यति मात्र नभएर जनताको बिचारलाई ध्यानमा राखी देश भरका एफ एम बाट समेत प्रसारण गर्ने योजना बनाइएको छ।
एक छोरीका लागि बाबु भनेको सुरक्षा कवच हुनु पर्ने हो तर अहिले को जमानामा छोरी हरु आफ्नै बाबु बात समेत सुरक्षित हुन् सकिरहेका छैनन्। देश भर बलात्कार का घटना बढिरहदा बाहिरका बात जोगिनु पर्ने त छदै छ। घर भित्र समेत आफ्नै बाबु बात यौन शोषण हुने जस्ता घटना भएको छ। आमा नभएको समयमा १० बर्षीय बालिका लाइ आफ्नै बाबुले बलात्कार गर्ने गरेको खुलेको हो। लामो सयमदेखि रोजगारीमा विदेशरहेका दिलबहादुर गैरे डेढ बर्ष अघि मात्र घर फर्किएका थिय ।
सन्तानको पहिलो रक्षक बन्नु पर्ने बाबु नै यसरि बलात्कार गर्न थालेपछि अब छोरीहरु कसको भरोषामा बस्ने। आफ्नै बाबु दानव निस्किए पछिको पीडा कस्तो हुन्छ बुटवलकी १० बर्षीया बालिकाले डेढ बर्षदेखि भोग्दै आएकी छन् ।
Previous Article रविको सिधा कुरा जनताको सेवा बिस्तार , ७ प्रदेशमै कार्यालय ! समस्या सुन्न हेल्प डेक्स ( भिडियो )
Next Article बिबादित अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदुत लक्की शेर्पाको बारेमा थप खुलासा ( भिडियो सहित )